Wararkii ugu dambeeyey : Shirka Garowe oo qarka u saaran inuu burburo
Shirka Wadatashiga ee Garowe oo qarka u saaran inuu burburo
GARIWE, Puntland - Shirka Wadatashiga Dowlada Federaalka iyo Maamulada oo ka socda magaaladda Garowe ayaa galay maalintii Shanaad oo la isla gaarey illaa iyo Salaadii Maqrib, sida ay xaqiijiyeen mas'uuliyiin xog ogaal ah.
Sida uu fahansan yahay Garowe Online, ma jirto wax horumar ah oo laga sameeyay qodobadii laysku hayey ee khilaafka Galmudug, sharciyada Bartoolka, doorashada, xisbiyada iyo la bedelo magaca Golaha Amniga Qaranka.
Xogta ayaa intaasi raacineysa in madaxweyne Xaaf lagu qanciyey in arrinta ku saabsan xalinta khilaafka kala dhaxeeya maamulka Farmaajo dib loo dhigo, isla markaana ajendeyaasha kale la guda galo.
Intii uu socday kulanku , waxaa garoonka diyaaradaha Kismaayo isku rasaaseeyay ciidamo ilaalo u ahaa murashax Cabdinaasir Seeraar, kaasi oo Muqdisho ka yimid, iyo booliska. garoonka
Madaxweyne Axmed Madoobe ayaa ku eedeeyay dowlada federaalka ah in ay iyaddu ka dambeyso wixii ka dhacay caasimada ku meel gaarka maamulka Jubbaland.
Murashax Seeraar ayaa lagu waramayaa in uu kamid yahay dhowr kale oo ay gedaal ka riixeyso Villa Soomaaliya oo dooneysa in ay ka takhalusto hogaamiye Axmed Madoobe.
Madaxda ayaa ku balamay in Afurka kadib ay isku soo laabtaan si wadahadalka halkiisa uga sii socdo. Balse, warsidaha GO wuxuu ogaaday in aysan dib dambe isugu soo noqon hogaamiyeyaasha.
Sikastaba ha ahaatee, waa markii labaad oo caqabad uu soo wajaho Shirka iyada oo markii koowaad ay ahayd arrinta Xaaf iyo Madaxtooyada, taasi oo hadda u muuqata in la qaboojiyey.
Balse xiisada kasoo korodhay magaalada Kismaayo iyo diidmada madaxda dowlada Federaalka iney aqbalaan kuwa ugu muhiimsan ajendayaasha shirka ayaa la tilmaamayaa in ay waji horleh gelineyso shirka, kaasi oo muddo ku dhaw todobaad socdo aysan wax natiijo ah gaarin madaxda siyaasada Soomaaliya.
Axmed Madoobe oo faahfaahiyay Sababihii fashiliyay Shirkii Garowe
War Saxaafaded 11.05.2019. 15:25
Madaxda dalka ayaa ku guuldareystay inay heshiis ka gaareen qodobada khilaafka ka taagan.
Soomaliya 20.01.2019. 00:50
Farmaajo iyo Madaxda Maamul Goboleedyada oo Shir culus uga socda Garowe
Puntland 27.01.2019. 13:40
Madaxda Soomaaliya oo shacabka u rajeeyay inay ku ciidan nabad iyo amaan
Puntland 04.06.2019. 01:01